Frantsa dia malaza noho ny fizahan-tany hidirana ny tanàna tsara tarehy sy malaza mari-toerana. Ny firenena dia nofy toerana halehany malaza manerana izao tontolo izao noho ny tsy mampino ny kolontsaina sy ny sakafo matsiro. Raha maro ny mpizaha tany mirohotra ho any Paris, ny tanàna matetika mety ho tena feno olona loatra, indrindra fa amin'ny fahavaratra. Soa ihany, Frantsa manana toy izany bebe kokoa ho atolotra fotsiny Paris ary hijery dimy kely etsy ambany tanàna be olona.
Ho an'ireo izay liana amin'ny maritrano, Lyon ihany koa ny an-trano ny isan'ny fiangonana Renaissance fa ho hitanao niparitaka manerana ny tanàna.
Raha toa ianao liana amin'ny ditin-kazo manitra, Grasse no tsara toerana ho anao. Rehefa niaina ny efa milamina, tarehy eny an-dalambe, hahita ny tenanao te hiverina indray, ary indray. Grasse dia toerana tsara tarehy miorina manamorona ny frantsay sy Riviera, ny fomba tsara indrindra hampiaiky volana ny an-toerana eto dia ny mampihatra ny frantsay! !
Malaza amin'ny maha-tanàna lehibe indrindra faharoa ao Frantsa, Marseille dia tanàna amoron-dranomasina miaraka amin'ny miavaka toetrandro. Ho hitanao ato Epic rava sy mahavariana centres kanto ny handao anao nampiantrano nandritra ny ora maro. Ho an'ireo mitady fialam-boly, Marseille no manaitra an-trano ny tora-pasika izay afaka handro amin'ny amin'ny mahafinaritra ranomasina. Marseille manome ny tsara indrindra na araka ny tontolo feno hetsika ara-kolontsaina ary koa ny tony tianao ho tony ao.
Matetika no heverina iray amin'ireo indrindra Frantsa tanàna underrated, Lille no tsy feno olona noho ny sasany tamin'ireo toerana frantsay malaza kokoa, fa mbola mitovy tsara tarehy. mpizaha tany dia afaka fandehandehanana amin'ny alalan'ny rivotra, mankao sakeli-dalana eto sy mankafy ny trano mareva-doko sy be olona na be rivotra iainana teny an-dalana. Fa tia zavakanto, ny Palace tsara Arts mozea dia tsy maintsy-toerana fitsidihana an-trano tahaka ny any Frantsa faharoa lehibe indrindra moa fanangonana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-less-crowded-cities-to-explore-in-france/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)